यी हुन् एक्लै बस्न रूचाउने ४ राशिका व्यक्तिहरु – Ktm Dainik
यी हुन् एक्लै बस्न रूचाउने ४ राशिका व्यक्तिहरु - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
दुनियामा मानिसहरु आ आफ्नै साथी भाई र ईष्ट मीत्र हुन्छ । कोही मानिसहरु अन्य मानिससंग छिट्टै घुलमेल हुन्छन् । भने कोहि कम हुन्छन् ।
शास्त्र अनुसार कोहि मानिसहरको आ आफ्नै ग्रह र नक्षत्र हुन्छन् । त्यसैले ति ग्रह नक्षत्रले मानिसको कुण्डलीमा प्रभाव पर्छ । जसले मानिसहरुको जिवनमा समेत प्रभाव पारेको हुन्छ । यस्तै नक्षत्रको आधारमा नै हरेक मानिसको राशि फरक फरक हुने गर्छ । फरक फरक राशिकै आधारमा मानिसहरुको स्वाभाव हुन्छ ।
केटिएम दैनिक युट्युवमा पनि छ । Youtube मा Ktm Dainik सर्च गरेर Subscribe गरिदिनुहुभयो भने हामीलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरु उत्पादन गर्न हौसला मिल्नेछ ।
हामीसँग पैसा भएको भए, हामी ट्वाइलेट सफा गर्न, भुईँ पुछ्न किन आउँथ्यौ र ? हाम्रो भविष्य यस्तै भयो, छोराछोरीको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ कि भनेर हामी अस्पतालमा काम गर्न आएका हौँ । अब हामीले के गर्ने ? कसरी खाने ?’
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, भदौ १४ २०७८ २०:२५:२६